Ikhabhinethi enoxolo kuManzi kunye noFikelelo loMlambo iPlatte
Leshara, Nebraska, United States
Wamkelekile eLeshara Lodge! Ibekwe ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka e-Omaha, sinikezela ngokuphumla okuthe cwaka kwingxolo yesixeko. Indlu yethu yeendwendwe ivalelwe emahlathini kwaye ibekwe emanzini ngokoqobo ngaphandle nje komnyango wangaphambili. I-Platte River ingaphantsi kwesiqingatha semayile yokuhamba. Umlobi kunye nabalindi beentaka baphupha - ngokwenene, iphupha kuye nabani na othanda indalo!
Indlu yethu yeendwendwe yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2019. Kwi-900 sqft, eli khaya le-studio-style lilingana nobukhulu bezibini okanye usapho olunabantwana ababini (kukho iibhedi ezimbini ze-queen kunye ne-mattress yomoya epheleleyo ekhoyo). Uya kuba nokufikelela kwi-grill yegesi yabucala, kwaye ikhitshi liza libonelela ngefriji yobungakanani obupheleleyo, i-microwave, itoaster, i-oven yetoaster, i-hotplate eneepani, i-skillet yombane, iiglasi, iipleyiti kunye nezixhobo. Ngelixa singaboneleli ngesidlo sakusasa esipheleleyo, iti, ikofu kunye nomenzi wekofu zinikezelwe - akukho nto ingcono apha ngaphandle kokuba nekomityi eshushu phandle kusasa.
Ngokhuseleko olongezelelweyo, kukho isango ekuya kufuneka ungene kulo ukuze ungene kwindlu yeendwendwe. Ikhowudi yeendwendwe iya kunikwa wena phambi kokuba ufike kwipropati. Ukongeza, kukho iikhamera zokhuseleko ezijikeleze ipropathi. Nceda uqaphele, akukho khamera ngaphakathi kwindlu yeendwendwe ngokwayo.
Siyathanda ngaphandle kwaye sifuna ukwabelana nawe! Ngokuhlala kwakho uya kuba nofikelelo olugcweleyo ekulobeni (kumacandelo amathathu ahlukeneyo amanzi-i-slough yamanzi afudumeleyo ebekwe kanye ngaphandle kwendlu yeendwendwe; kuMlambo iPlatte, okukuhambo olukhawulezayo lwemizuzu eli-10; okanye kwidama elikufuphi ukuya emlanjeni), ukuhamba ngephenyane, ukuhamba kwindalo, kunye noMlambo iPlatte (ukuhlala kwisanti okanye ukuphosa umgca!). Indlu yethu yeendwendwe ikwi-50+ yeehektare, ngoko ke kukho indawo eninzi yokuzulazula!
Uyonwabele izilwanyana zasendle?? Nazi nje * ezinye* zabatyeleli bethu abaqhelekileyo: ixhama, iturkey, mink, impungutye, iCanadian Geese, Baltimore Orioles, Bald Eagles, hummingbirds, kunye nezinye iintlobo ezininzi zeentaka. NgoJanuwari 2021 amadoda amabini ePercheron Horses ajoyina ipropathi. IBhere kunye noRocky kulula ukuzibona xa uhamba usiya emlanjeni kwaye uthanda ukubulisa abantu. Wamkelekile kakhulu ukuba uziphulule, ukuba nje uhlala kwicala lakho locingo. :)
Qiniseka ukuba uze neepali zakho zokuloba kunye nezixhobo! Lindela ukubamba i-catfish, i-bass, i-carp, i-crappie, okanye i-walleye ngamaxesha athile. I-Northern Pike yenza imbonakalo enqabileyo! Ukuloba ngesaphetha ngomnye umsebenzi odumileyo apha.
Zonke iintlanzi ozibambileyo zinokugcinwa kwaye zicocwe, ngaphandle kwezo zibanjwe echibini; ekubambisa kunye nokukhulula kuphela.
*Nceda uqaphele, kuyacetyiswa ukuba uze neebhatyi zobomi ukuba uceba ukungena kuMlambo iPlatte*
5.0 ·Izimvo eziyi-98
5.0 · Izimvo eziyi-98
ILeshara yilali encinci ekhethekileyo. Kwakhona, kude ngokwaneleyo kubomi besixeko (imizuzu nje engama-30 ukusuka e-Omaha) kodwa kuninzi ekufuneka kwenziwe kufutshane. Idolophu yaseValley ikumgama wemizuzu emi-5, kwaye ibonelela ngayo yonke into onokuyidinga ngendlela yegrosari, igesi, izinto eziyimfuneko kunye nokutya. Kukho nee-boutique ezininzi zokuthenga ezonwabileyo.
I-Woodcliff Lake yimizuzu nje eli-10 phantsi kwendlela. Ukuba ufuna ukuthatha ubusuku ekutyaleni, sicebisa kakhulu enye yeebhara zabo ezintathu / zokutyela - zonke zisemanzini.
Ukuba ufuna naziphi na iinkcukacha kwiindawo zokutyela ezikufutshane, nceda ubuze nje. Sizithatha njengesiqhelo kwiindawo ezininzi ezikufutshane.
Ikhaya lethu kuphela kwendlu enye kwipropathi ekufutshane. Ngelixa siqhelekile kwiindwendwe zethu, siyazi ukuba ubumfihlo bungundoqo kwaye siya kukunika oko nge-100% - ngaphandle kokuba, ngokuqinisekileyo, unemibuzo okanye ufuna naluphi na ukhokelo kwipropati; ngoko ke siya kukuvuyela ukunceda!
Sizakuthatha ithuba apha sithi ucoceko yeyona nto iphambili kuthi, ingakumbi ngeli xesha. Ngelixa besihlala sizame ukuyigcina icocekile indlu yeendwendwe, sithatha amanyathelo okhuseleko ongezelelweyo- kwiindwendwe zethu kunye nathi-ukuqinisekisa ukuba indawo leyo icocekile ngokufanelekileyo phakathi kotyelelo lweendwendwe.
Ikhaya lethu kuphela kwendlu enye kwipropathi ekufutshane. Ngelixa siqhelekile kwiindwendwe zethu, siyazi ukuba ubumfihlo bungundoqo kwaye siya kukunika oko nge-100% - ngaphandle k…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Leshara